एनआईसी एशिया बैंकको नाफामा सामान्य वृद्धि, प्रतिशेयर आम्दानी रू.४२. १४
कात्तिक २८, काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले चालू आव २०७७/ ७८ को पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रको अधिकांश वित्तीय सूचकांकहरूमा अग्रणी स्थान ओगटेको उक्त कम्पनीको चालू आवको पहिलो त्रैमासका समग्र वित्तीय विवरणका परिसूचकहरू उत्साहजनक रहेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सृजित असहज अवस्था, अर्थतन्त्रमा आएको अस्थिरता, आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी जस्ता विषम परिस्थितिमा पनि कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४२ दशमलव १४ आर्जन गरेको छ ।
कम्पनीले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ प्रतिशतले मुनाफा वृद्धि गरी रू. १ अर्ब २ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीको स्व–पूँजीमा प्रतिफल २२ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ ।
कम्पनीको प्रथम त्रैमाससम्ममा कर्जातर्फ रू. २९.८ अर्बले वृद्धि भई कुल कर्जा रकम रू. २०३.६ अर्ब पुगेको छ । जुन मुलुकका वाणिज्य बैंकहरूमा सोही अवधिमा भएको करीब रू.१२९ अर्बको कुल वृद्धिमा उक्त कम्पनीको २३ प्रतिशतको हिस्सा रहेको छ ।
साथै कम्पनीले स्वदेशी मुद्राको निक्षेप संकलनतर्फ रू.३६ दशमलव शून्य ६ अर्बले वृद्धि गरी स्वदेशी मुद्राको निक्षेप संकलन रू. २४४.८७ अर्ब पुर्‍याएको छ । साथै कम्पनीको कुल निक्षेप रकममा व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा ६४ प्रतिशत रहेको छ भने संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ३४ प्रतिशत रहेको छ ।
कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा समेत कम्पनीले कर्जा असुलीमा गत वर्ष अन्त्यमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जालाई पहिलो त्रैमाससम्मा शून्य दशमलव ४० प्रतिशतमा झारेको छ । कम्पनीले आफ्नो रणनीति अनुसार कर्जा पोर्टफोलियोमा न्यून जोखिम कायम गर्ने उद्देश्यले साना तथा मझौला कर्जा र रिटेल कर्जामा लगानी विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताएको छ ।
कम्पनीले आव २०७६/ ७७ को लागि हालसम्म आफ्नो लाभांश सार्वजनिक गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लाभांश मंसिर २१ गते हुने २३ औं वार्षिक साधारण सभाले स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।